अमेरिकन अनूशन्धानकर्ताहरुको नयाँ तथ्य : कोरोना भाइरस कान मार्फत पनि सर्छ ! « गोर्खाली खबर डटकम
अमेरिकन अनूशन्धानकर्ताहरुको नयाँ तथ्य : कोरोना भाइरस कान मार्फत पनि सर्छ !
एजेन्सी, ११ साउन । अनूशन्धानकर्ताहरुले कोरोना भाइरस सम्बन्धी नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । कोरोना भाइरस मानिसहरुमा मुख र नाकबाट मात्रै सर्दै आएको बताइएपनि कानबाट पनि सर्ने तथ्य फेला पारेका हुन् । बैज्ञाजिनकहरुले बैज्ञानिकहरुले गरेको अनूशन्धानमा कोरोना भाइरसले मानिसको कान र मेस्टोयड हड्डीलाई पनि संक्रमण गराउन सक्ने तथ्य फेला पारेका हुन् । अमेरिकाका अनूशन्धानकर्ताहरुले तीन केसमा यस्तो तथ्य फेला पारेका छन्
उनीहरुले गरेको काेराेनाबाट ज्यान गएका ३ मृत शरीबाट अनूशन्धान गरेकाे बताइएको छ । सो क्रममा तीनै मृतकहरुको दुवै कान र पछाडिका भागमा पनि कोरोना संक्रमण पाइएको थियो । उनीहरुको निष्कर्षसँगै अमेरिकाका रिसर्चर जोन ह्ययापकिन्स स्कूल अफ मेडिसिन्सका शोधकर्ताहरुले कोरोनाको लक्षण देखिएका मानिसको कानको परीक्षण पनि हुनुपर्नेछ ।
काठमाडौंमा ५०० मा भाँडा माझ्ने अन्जली लामा विश्वकै चर्चित मोडेल हुदै अब हलिउड फिल्ममा डेब्यू गर्दै (फोटो फिचर)
नेपालमा आज ४ हजार ४७ संक्रमित थपिए, कुल एक लाख ११ हजार ८०२ पुग्यो